Imithambo yentsimbi. Isibane esikhulu, nguMaria Konnikova
Umbhali ngaphambi kokuba abe ngumdlali we-poker, UMaria Konnikova Ufike kumdlalo wekhadi ukusuka kuloo drive yomlandisi ngamnye ofuna ukusondela kwisimo esitsha sokulandisa ukuze athabathe umxholo. Songeza kumcimbi wobugqirha bakhe kwizengqondo kwaye sifumana ingxelo ephucukileyo yenguqulo ye-Pelayo Russian.
Ukungxama kokuqala, uMaria wafunda iincwadi kuyo yonke into enokusasazwa kwipoker. Umdla wakhe kolo lungelelwaniso phakathi kwamathuba kunye nokukwazi ukwenza i-psychology ibe sisixhobo esibalulekileyo sokwenza amakhadi amabi alungile okanye ameme umchasi ukuba acinge ngenye indlela. Abanye bathi umdlalo ibilisa kwizibalo kwaye kukho abo bayaziyo ukuba, ngaphezulu kwayo yonke loo nto, umbuzo ngulo, ngokuchanekileyo, ukongeza kunye nokuthabatha ii-will ngapha nangapha kwetafile.
Ngo-2016 uMaria Konnikova waba nomdla kwindima edlalwa lithamsanqa kubomi bethu kwaye yonke into eyenzekayo kuthi inokulawulwa. Ukufumanisa, wagqiba kwelokuba angene kwihlabathi le-poker ukusuka ekuqaleni kwaye abone ukuba amandla omdlalo aluncedo kubomi bethu bemihla ngemihla. Khange akrokre ukuba kwiinyanga ezimbalwa kakhulu uza kuhamba engazi ukuba mangaphi amakhadi enqanaweni ekufuneka abe yintshatsheli yamazwe aphesheya kwaye aphumelele ngaphezulu kwamakhulu amathathu amawaka eedola kwibala elinokhuphiswano olunamandla kunye nenkundla yamadoda.
Ngelixa sihamba nomlobi ukungena kunye nokuphuma komdlalo ukuya phezulu, sifumanisa yonke into enokuthi ikwazi ukutyhila malunga nokuziphatha komntu, ukuthatha izigqibo, ukulawulwa kokukhathazeka okanye indima yamathuba ebomini bethu.
Phakathi kwe-epic adventure kunye noncwadi oludumileyo, uKonnikova uvula umnyango kwihlabathi elinomdla kwaye usimema ukuba sazane ngakumbi kwaye sidlale amakhadi ethu ngeyona ndlela ifanelekileyo. Ukubaliswa kwamabali okuqaqambileyo okuye kwaba yinto eyothusayo eMelika.
Ngoku ungathenga incwadi "Isibane Esikhulu", nguMaría Konnikova, apha:
Iilebula Iincwadi zesayensi, UMaria Konnikova